Petra Malin: Vaaliteemat somaliksi
Waxaan ahay goddoomiyaha xisbiga vasemmisto ee magaalada Helsinki iyo musharaxad golaha deegaanka ee sanadka 2017.
Waxaan kusoo biiray 5sano ka hor siyaasada deegaanka, sababtuna waxeey aheeyd golaha deegaanku waxeey go'aan ka gaadhaan arimaha sida tooska ah u taabaniya nolosha dadka dagan magaalada Helsinki, sidoo kale siyaasadu waxeey u baahantahy daahfurnaan iyo go'aamo cadaalada.
Waxaan jiraa 36 sano waxaanan daganahay magaalada Helsinki. Waxaan rabaa Helsinki, daadkeedu faraxsan yihiin, dhamaan dadku simanyihiin qofkastana la daryeelayo.
Doorashada waxaan rabaa inaan wax ka qabto arimaha xanaanooyinka iyo dugsiyada, sooshalka, caafimaadka iyo arimaha dhaqamada, si uu qofkasta xaafadkasta oo Helsinki ka mid ah uu adeegyo fiican u helo.
Qofkasta waa inuu guri helo, qiimaha ijaarka guryahana waa in hoos loo dhigo.
Deegaanka waa in la ilaaliyo, xuquuqda bani'aadankana waa in la dhoowro.
Hada waxaan ahay xildhibaan ku xigeenka koobaad ee deegaanka Helsinki iyo sidoo kale waxaan xubin ka ahay golaha ka taliya arimaha xanaanooyinka caruura ee Helsinki.
Sananadadii danbe waxaan ku soo shaqeeyay sooshalad ahaan aniga oo sooshalad u ahaa dadka waa weeyn bariga Helsinki iyo maamulaha sooshalada magaalada Espoo. Waxaan sidoo kale wax ka bartaa jaamacada Helsinki, gaar'aah kuliyada cilmiga bulshada.